Barnaamijyo | Mustaqbal Radio
Home - Barnaamijyo
Isku aadka koobka kooxaha Yurub ee Europa league ayaa goordhow la sameeyay, iyadoo kooxda Arsenal ay ku dhacday naadiga Ruushka ah ee CSKA Moscow. Atletico Madrid oo reer Spain ah ayaa ku dhacday Sporting CP oo Portugal ka socota, halka Leipzig oo Germany ah ay ku dhacday naadiga Marseille ee dalka Faransiiska. SIDAN AYUU U DHACAY ISKU AADKA WAREEGA ...
Ciyaaraha koobka kooxaha Yurub ee Champions league ayaa waxay kooxuhu iskugu beegmeen kulan xiiso badan. Real Madrid iyo Juventus ayaa isku beegmay, iyadoo kooxaha England ka socda ay isku aadeen. HALKAN KAGA BOGO ISKU AADKA KOOXDA CHAMPIONS LEAGUE. Sevilla vs Bayern Munich Juventus vs Real Madrid Man City vs Liverpool Barcelona vs Roma Ciyaaraha hore waxay dhici ...
Kooxda Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay go’aansatay inay qandaraaska u cusbooneysiiso xiddiga khadka dhexe ee Mohamed Elneny. Elneny ayaa la joogay Gunners tan iyo bishii Janaayo 2016, laakiin xiddiga heerka caalami ee dalka Masar ayaa 24 kulan oo uu ku soo bilowday Premier League, 23ka kulan ee kale tartamada oo dhan. Sida laga soo xigtay jariiradda The ...
Naadiga Manchester United ayaa ku dhawaaqday in Marcos Rojo uu qandaraas cusub u saxiixay Old Trafford. Rojo ayaa United joogay tan iyo bishii August 2014, iyadoo ciyaaryahanka reer Argentine uu 105 kulan u saftay tartamada oo dhan tan iyo markii uu yimid. Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Argentina ayaa kaliya 10 kulan u ciyaaray intii uu socday xilli ...
Aalada caawinta garsoorayaasha VAR ayaa loo isticmaali doonaa finalka Koobka Adduunka ee xagaaga. Guddiga Xiriirka Caalamiga ah ee Kubadda Cagta ayaa si buuxda u ansixiyay in VAR lagu soo daro tartanka Ruushka kulan ka dhacay horaantii bishan. “Waxaan u baahanahay inaan la noolaano waqtiyada aan joogno,” BBC Sport ayaa sidaasi kasoo xigatay madaxweynaha FIFA Gianni Infantino. “Waxaan dooneynay inaan ...
Kooxda Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay heshiis la gaartay xiddiga Bayern Munich Robert Lewandowski. Sida laga soo xigtay Mundo Deportivo, heshiiska ayaa yimid ka dib labo kulan oo u dhaxeeyay wakiilka cusub ee reer Poland Pini Zahavi iyo madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez. Lewandowski ayaa la sheegay inuu diyaar u yahay inuu qandaraas laba sano ...
Leicester City vs Arsenal Burnley vs Chelsea iyo dhammaan kulamada xiisaha badan ee laga ciyaari doono Horyaalka Premier League.
Waxaa maanta ilaa cwa dib loo ciyaari doonaa kulamo xiiso badan oo ka tirsan horyaalka Ingiriska. Kooxo waa wayn ayaa cwa fooda isdari doona sida kulanka weyn ee ka dhicidoono garoonka Leister oo ay soo dhaweyn doonaan kooxda Arsenal. Halkan kaga bugo kulamada xiisaha badan ee maanta ilaa cwa laga ciyaari doono horyaalka Premier League. Burnley? – ...
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey ayaa Gabadhaba Somali-Canadian-ka ah ee Ilwaad Elman Cali u magacaabay mid ka mid ah lataliyayaashiisa dhinaca howlgallada nabad ilaalinta Caalamka. Ilwaad ayaa Boggeeda Istagram-ka ku soo qortay magacaabistaas iyada oo sheegtay in ay aad ugu faraxsantahay in ay ka mid noqoto la taliyayaasha António Guturres. Xilkeedu waxaa uu noqonayaa lataliyaha António Guturres ee maalgelinta howlgallada ...
Lionel Messi ayaa labo jeer shabaqa soo taabtay kulankii Barcelona ay xasuuqday Chelsea Champions League wuxuuna dhaliyay goolkiisii 100aad ee tartanka yurub. Messi ayaa xalay xili hore gaaray shabaqa goolhaye Thibaut Courtois daqiiqadii seddexaad kulankii Camp Nou. Xiddiga reer Argentina ayaa sidoo kale caawiyay goolkiisii ugu horeeyay ee Champions League ee Ousmane Dembele. Inkastoo uu aaminsan yahay ...
Naadiga AC Milan ayaa lagu soo waramayaa inay ku biirtay tartanka loogu jiro saxiixa Jack Wilshere, hadii ciyaaryahanka khadka dhexe uu ku guuldareysto inuu heshiiska u kordhiyo Arsenal ka hor dhamaadka xilli ciyaareedkan. Heshiiska haatan ee Wilshere ee Emirates Stadium ayaa dhacaya xagaaga, waxaana wadahadalada uu sii dheereynayo inuu sii joogayo Waqooyiga London ay soo gaarsiiyeen isbedel ku yimid ...
Kooxda Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay u sheegtay in ay 142 milyan ginni ku dooneyso Mohamed Salah oo katirsan Liverpool xagaagaan. Salah ayaa ku jira qaab ciyaareedka cajiib xilli ciyaareedka, isagoo dhaliyay 32 gool tartamada oo dhan, oo uu ku jiro 24 gool oo horyaalka Premier League ah. Xidiga garabka ka ciyaara ee reer Masar ayaa ...
Waxaa xalay markale dib loo ciyaaray kulamo xiiso badan oo ku tirsan lugta labaad wareega 16-kan ee Champions Leque. Kulankii kowaad waxaa uu xalay fiidkii ka dhacay garoonka kooxda Basiktas ee dalka Turkiga waxaana xalay markale guul gaartay kooxda reer Germany ee Munich waxeyna ku adkaadeen 3-1. Kulankii labaad ee xiisaha badnaa xalay waxaa uu ka dhacay garoonka ...